कांग्रेस बैठकमा ६ घन्टा बोले गोपालमान र गच्छदार - Dainikee News::
काठमाडौं, वैशाख १४ । बिहान पौने ११ बजे सुरु भएको बिहीबारको बैठकमा सुरुमै बोल्ने पालो पाए पुराना नेता गोपालमान श्रेष्ठले । उनले सवा घन्टा बोलेपछि नेताहरूले ‘भोक लाग्यो’ भन्न थाले । सदस्यहरूको मागअनुसार खाना खान बैठक स्थगित गरियो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
के गर्ला निर्णय ?
प्रवक्ता शर्माका अनुसार कांग्रेसले महासमितिको बैठक आह्वान, विधान मस्यौदा समिति गठन, पार्टी सुदृढीकरणको भावी अभियान, संविधान संशोधन, कार्यान्वयन, सरकारको काम र कदमप्रतिको धारणा, मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धसहितका विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । तर, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष आफूहरूको विषय र माग सम्बोधन हुने गरी चित्त बुझ्ने निर्णय नआए थप बहस गर्नुपर्ने योजनामा छन् । आफ्ना एजेन्डा अन्तिम निर्णयमा समेटेरै छाड्ने उनीहरूको कसरत छ।
शुक्रबार महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अहिलेसम्मको छलफलको विषयलाई निर्णयको प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् । यो प्रस्ताव पार्टीका सबै पक्षसँगको छलफलमा आउने र निर्णय हुने प्रवक्ता शर्माले बताए ।
प्रवक्ता शर्माले अब छिट्टै पदाधिकारी चयन हुने पनि बताए । ‘अब निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा छिट्टै पदाधिकारीको प्रस्ताव सभापतिबाट हुनेछ,’ उनले भने, ‘ढिलोमा जेठको दोस्रो हप्ता कांग्रेसले बाँकी पदाधिकारी पाउनेछ ।’
एकातिर कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन बन्नु, अर्कोतिर पार्टीभित्रै अन्तर्घात हुनु नै निर्वाचनमा हार्नुको कारण हो । पञ्चायतले दिएको दुःखसँग लड्दै आएको र विगतमा पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेकाले अहिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका पाउने आशा छ ।
सम्झौताको फाइल पेस गर्दै गच्छदारले मागे उपसभापति
बैठकमा कांग्रेससँग पार्टी एकता गर्दाको सम्झौताको फाइल पेस गर्दै उनले ‘यथोचित समायोजन’लाई टुंगोमा पु-याउन नेतृत्वलाई आग्रह गरे । केन्द्रीय समितिमा १५ देखि २० सदस्यसहित उपसभापति, सात सय महाधिवेशन प्रतिनिधि, तीन सय महासमिति सदस्य, २० हजार क्रियाशील, ६३ जिल्लामा केन्द्र मातहतका निकायमा सम्बन्धित समितिको उपसभापतिसहित १० सदस्य र हरेक विभागमा तीन सदस्य आफूहरूलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
जे भन्नु छ पार्टीभित्रै भनौँ : विजयकुमार गच्छदार
बाहिर होइन, पार्टी सुधारका लागि नेताहरूकै अगाडि निर्धक्क भएर कुरा राख्नुपर्छ । तपार्इंहरूले कुरा नराखे पनि म राख्छु । गिरिजाबाबुसँग पनि म आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्थेँ । प्रधानमन्त्री हुँदा किसुनजीलाई हटाउनुहुँदैन भनेर कुरा राख्ने मै हुँ । रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन खोज्दा ‘अब्जेक्सन’ गरेँ । कांग्रेसमा हुँदा र बाहिर छँदा पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेँ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १४, २०७५ /Friday, April 27th, 2018, 6:32 am